Job vacancies | Moon Sun Co.,Ltd ﻿
No.161/1,Coner of Thunadar Street & Thudmma road, North Okkalapa Tsp, Yangon
Moon Sun Trading Co., Ltd. is located at 163/1, Thudhamar St., Thunandar Ward, North Okkalapa Township. , Yangon.Phone numbers are 01 – 692482 and 01 – 691366. Business service category/products include-Petrol Stations.For more details please contact Moon Sun Trading Co., Ltd. directly at address in Yangon.
Company's main business category is Filling Station/Petroleum Equipment.
Moon Sun Trading Co., Ltd. is located in 163/1,Thu Nandar Rd.,Corner of Thu Dhamar Rd.,, North Okkalapa township, Yangon, Myanmar.
Supervisor (For Petrol Station) •	Excellent verbal and written communication skills at technical & professional levels. •	Able to travel if necessary. •	Able to work over-time if necessary
•	Inspect facilities and analyze operational data •	Maintain compliance with safety and regulatory standards •	Compile estimates for technical and material requirements for project development
•	Verifying, allocating, posting and reconciling accounts payable and receivable •	Producing error-free accounting reports and present their results •	Analyzing financial information and summarizing financial status
•	Oversee day to day operations of the facility •	Provide for site safety and security •	Conduct regular inspections and maintenance of systems and equipment
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
•	ရုံးကားများ လမ်းကြောင်းသွားလျှင် အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးရန်နှင့် ဆိုင်ခွဲများသို့ဖယ်ရီကိစ္စများအား စီစဉ်ပေးရန်။ ကားများပြန်ရောက်လျှင် ၀ှီးတက်များအားစစ်ဆေးရန်။ •	ရုံးကားများ ပျက်လျှင် ပြင်ဆင်ပေ� ...
. စက်သုံးဆီနှင့်ပတ်သတ်၍ Accounting အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ . Accounting နှင့်ပတ်သတ်သော Diploma နှင့်Certificate များရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ . Accounting နှင့် ပတ်သက်၍ Monthly Report, Yearly Report များကို စနစ်တကျရေးဆွဲ နိုင်သူဖြစ်ရမည ...
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
•	The organization's human resources by planning, implementing, and evaluating employee relations and human resources policies, programs, and practices. Tasks •	Maintains HR Policies and rules. Perform continues improvement on the policy based on employee feedback and business needs. •	Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures. •	Follow up in enforcing HR policies and study on effectiveness. •	Maintains the work structure by updating job requirements and job ...
Assistant Manager (Petrol Station) •	Able to travel if necessary. •	Able to work over-time if necessary •	တာဝန်ကျသည့်မည်သည့်ဆီဆိုင်မဆို နေ့/ညအလိုက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်၊၊
Driver (အိမ်စီးကားမောင်းရန်) •	လှိုင်မြို့နယ်နှင့် နီးစပ်သူအားဦးစားပေးမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်ရမည်။ •	Hightway မောင်းနိုင်သူ (လိုအပ်မှသာ)ဖြစ်ရမည်။
Vehicle Assistant Manager
•	ယာဉ်များမထွက်ခွာမှီ ယာဉ်ကြံခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းရယူခြင်း။ •	ယာဉ်မောင်းများအား တာဝန်ခွဲဝေ၍ လိုအပ်သည်များမှာကြားခြင်း။ •	ယာဉ်များစစ်ဆေးတွေ့ချက်အား မော်တော်ယာဉ်မှူး စီနီယာမန်နေဂျာထံတင်� ...
•	Daily Sales to customers & follow up for customers. ( Wholesales ) •	Daily Sales follow up from each stations & Head Office. Order demand for mobile sales. •	Daily Report to direct for wholesales by price, litre & issued point (Depo) & arragement. •	Daily Report to Dierctor for wholesale price & retail price before 10:30 AM & after-noon check for price change. •	Recieving data from all station's complaints, price negonitiation, customer require-ments, feedback & report to director. •	Prepare for co ...
• BODမှညွှန်ကြားထားသည့် Moon Sun Group ရှိ Trading & Construction ၏ကိစ္စရပ်များ အား ဆောင်ရွက်ရန်။ • သက်ဆိုင်ရာ CAမှတင်ပြသည့်စာရင်းများ (Monthly ? Quarterly ? Yearly) လချုပ်စာရင်းများ အား စစ်ဆေး၍ Consolidation Company တစ်ခုလုံး၏စာရင်းအားပြုစုတင်ပြရန်။ • လစဥ� ...